Windows 10 တွင်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုပိတ်ပါ
နေအိမ်/Windows ကို 10/Windows 10 တွင်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုပိတ်ပါ
Vangelis20 ။ ဇူလိုင်လ 2021
အောက်တွင်ရှိပြီးသားအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုသင်စစ်ဆေးနိုင်သည် Windows ကို 10 အခါတိုင်းပိတ်ထားသည်။ အင်တာနက်ကိုသင်မည်မျှကြာအောင်ပိတ်လိုသည်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်၊ ဥပမာ ခ။ မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်အမြဲတမ်း။
4 network adapter မှတဆင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုပိတ်ပါ
မတူညီတဲ့အကြောင်းအရင်းများစွာရှိနိုင်ပါတယ် Windows 10 ကိုအော့ဖ်လိုင်းယူပါမရ။ သင်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနှင့်အွန်လိုင်းတွင်သာအလုပ်လုပ်ချင်သည်။
Windows 10 ၌အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုပိတ်ခြင်းကိုအဆင့်အနည်းငယ်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ မင်းရဲ့စမတ်ဖုန်းမှာအင်တာနက်ပိတ်တာနဲ့အမျှလွယ်ကူပါတယ်။
သင်ဟာ Windows 10 ကို laptop တစ်လုံးသုံးနေလျှင်၎င်းကိုသုံးနိုင်သည် WiFi ကိုပိတ်ပါအများစုသည်ထုတ်လုပ်သူတွင် switch (သို့) အများအားဖြင့်ရှိသည် အဖွင့်အပိတ် အရှေ့ဘက်တွင်တပ်ဆင်ထားသော Switch ကီးဘုတ် သို့မဟုတ် keyboard shortcut ကိုသုံးပါ "FN + WLAN သော့".
အဲဒါနောက်တစ်နည်း ကြိုးမဲ့အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုပိတ်ထားပါ၎င်းသည်သတင်းအချက်အလက်စင်တာကိုဖြတ်သွားသည်။ taskbar ၏ညာဘက်ခြမ်းရှိစကားသံပူဖောင်းသင်္ကေတကိုနှိပ်ပါ၊ လေယာဉ်ပျံပုံစံကိုဖွင့်ပါသို့မဟုတ် WLAN ကိုပိတ်လိုက်ပါ။
network adapter မှတဆင့်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုပိတ်ပါ
Windows 10 setting များကိုဖွင့်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ key ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်သည် Windows + I ပါ.
အင်တာနက်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ဘယ်ဘက်ကိုနှိပ်ပါ "WLAN" သို့မဟုတ် "Ethernet" ပြီးတော့ဆက်လုပ်ပါ "adapter ရွေးချယ်စရာများကိုပြောင်းပါ".
ဖွင့်ထားသော window တွင် right-click နှိပ်၍ "Deactivate" ကိုရွေးပါ။
၁။ Device Manager ကိုစတင်ရန်ရိုးရှင်းပြီးမြန်သောနည်းလမ်းသည်၎င်းမှတဆင့်ဖြစ်သည် Start menu ။
Windows 10 အတွက်ကီးတွဲကိုနှိပ်ပါ Windows ကို + Xမရ။ အမျိုးမျိုးသောစာများဖြင့်ပြတင်းပေါက်ငယ်တစ်ခုဖွင့်သည်။ Device Manager ကိုနှိပ်ပါ။
2. အောက်သို့ဆင်းပါ ကွန်ယက် adapter
၃။ သင်၏ WLAN နှင့် LAN adapter ကိုနှိပ်ပါ၊ ကိရိယာကိုပိတ်လိုက်ပါ။
Windows 10 တွင်သတိပေးချက်များကိုပိတ်ခြင်းကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ
Windows 10 အက်ပ်များအလိုအလျောက်ပြန်လည်စတင်ရန် / ပိတ်ရန်
Windows 10: လက်တော့ပ်တက်ဘလက်ကိုရှာပြီးမှတ်စုစာအုပ်ကိုပြန်ရှာပါ
Windows 10 အသုံးပြုသူများနှင့်ဂုဏ်သတ္တိများကိုပြပါ
Windows 10 network settings ကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ပါ
Windows 10 update အသိပေးချက်ကိုပိတ်ထားပါ
Windows 10 အလိုအလျောက်အရန်သိမ်းခြင်းကိုသတ်မှတ်ပါ
ဒီ PC ကို Windows 10 ကို update version 1903 နဲ့မွမ်းမံလို့မရဘူး
Windows 10 OneDrive ကိုပိတ်ပါ
၎င်းသည် Windows 10 အောက်တွင် virtual desktops များကိုမည်သို့သုံးနိုင်သည်
21 ။ ဇူလိုင်လ 2021
Microsoft Print ကို PDF ဖြင့်ပုံသို့ PDF သို့ပြောင်းပါ
18 ။ ဇွန်လ 2021